Stella Ndabeni-Abrahams Archives - Voice of the Cape
EFF opens case against Ndabeni-Abrahams for contravening lockdown regulations
9 April 2020 • Local, News	• No Comments
The EFF has opened a case against Communications Minister Stella Ndabeni-Abrahams for allegedly contravening the lockdown regulations. This after Ndabeni-Abrahams was pictured having a meal at the home of former deputy minister of higher education Mduduzi Manana, which left many South Africans on social media calling for her head. She[…]
Ndabeni-Abrahams summoned to explain lunch photo
8 April 2020 • Local, News	• No Comments
Minister of Communications Stella Ndabeni-Abrahams is in hot water after it was revealed that she had violated the lockdown by visiting former deputy minister Mduduzi Manana. Manana posted an Instagram photo of Ndabeni-Abrahams having lunch at his home over the weekend. President Cyril Ramaphosa has summoned the minister to explain[…]
Stella Ndabeni-Abrahams explains Geneva blunder
20 February 2020 • Local, News	• No Comments
Communications Minister Stella Ndabeni-Abrahams explained she meant to say France when she said she went to Geneva, not Switzerland, with her husband in a televised interview over the controversial trip. “You flew your husband on taxpayers’ money all the way to Switzerland in order to celebrate the anniversary of your[…]